မက္ကစီကို Riviera မာယာ
by မင်းသမီး Emma Sloley
အဆိုပါ Riviera မာယာရဲ့ Eco-Luxe ကံကြမ္မာ
Tulum မက္ကဆီကိုရဲ့အပေါ်တစ်ဦးထားကြ၏-ကျောကမ်းခြေမြို့ဖြစ်ပါတယ် ယူကာတန်ကျွန်းဆွယ် အချို့ 80 မိုင်အကွာတောင်ဘက် Cancun ၏တည်ရှိပြီး။ ဒါဟာအဖြစ်လူသိများယင်းဒေသ၏တောင်ဘက်နယ်နိမိတ်ခြေတစ်လှမ်း Riviera မာယာ ။ Tulum င်း၏လှပသောကမ်းခြေနှင့် upscaling hippie Vibe များအတွက်ငဲ့ကှကျဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, မြို့ဖြစ်ကောင်းယင်း၏အထင်ကြီးဘို့အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်ပါသည် မာယာပျက်စီးခြင်း စိမ်းသမုဒ္ဒရာတစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်လမ်းပိုင်းအားအပေါ်စီးမှ clifftop အပေါ်သိသိသာသာ ထား. ။
အစား scruffy, အဓိကမြို့စင်တာဟိုတယ်ဇုန်နေစဉ်, လက်ျာဘက်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးဘေးတွင်သတ်မှတ်ထားသို့မဟုတ် "Zona Hotelera" ဟုပူကျင့်ရှင်း Ka ဆီသို့ဦးဆောင်တောတွင်းနှင့် beachfront ၏တစ်ဦးထက်ပိုချောင်လမ်းပိုင်းဖြစ်ပါသည်လျှင်, သွက်: Tulum နှစ်ခုကွဲပြားဒေသများသို့ကွဲပြား '' ကာဇီ။ အများအပြားခရီးသွားများအတွက်အပျက်အယွင်းသွားရောက်လည်ပတ်ပြီးနောက် Tulum အတွက်နေရစ်ကြဘူးနေစဉ်, သူတို့အထဲကပျောက်ဆုံးနေတာ: က stunningly ရိုင်းကမ်းခြေနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထမင်းစားခန်း, သောက်သုံးရေနှင့် spa အခွင့်အလမ်းများကိုတစ်ဦးရက်အနည်းငယ်ဖြုန်းနှင့်ဖြေလျော့ပေးခြင်း, Eco-friendly Vibe တက်စိမ်ကောင်းစွာရကျိုးနပ်ပါတယ်။
အဘယ်အရာကို Tulum အတွက်သလားမှ:
အဆိုပါ Explore Tulum ၏အပျက်အယွင်း (နေ့စဉ် 8 am-5pm ဖွင့်), အဘယ်သူ၏အတော်လေးကျိုးနွံဒီဇိုင်းသမုဒ္ဒရာထဲအပေါ်စီးကသူ့ရဲ့မမေ့နိုင်သော setting ကိုကလျော်ကြေးငွေထက်ပိုသည် Postclassic ကာလကနေမာယာအဆောက်အဦများ၏စပျစ်သီးပြွတ်။ ထိုနောက်ပင်လယ်၌တစ်ဦးသို့ကျဆင်းလာယူရန်သေချာစေပါ
သငျသညျစဉ်အဆက်အတှေ့အကွုံလိမ့်မယ်အရှင်းလင်းရေထဲမှာထူးချွန်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကြည့်, ငှက်ကြည့်ခြင်းနှင့်ရေကူးဘို့တစ်ယူနက်စကိုဇီကြေငြာကိုထိန်းသိမ်းပူကျင့်ရှင်း Ka'an သည်အံ့မခန်းသဘောသဘာဝမှတစ်နေ့လျှင်ခရီးစဉ်ကိုယူ
ယင်းကမ်းခြေအပေါ်သူတို့ဥကိုတင်သောပင်လယ်လိပ်များကိုစောငျ့ရှောကျ: တူသောအများအပြားဟိုတယ်များ, , La Nueva Vida က de Ramiro , အလိပ်နှင့်သူတို့၏ကြက်ဥကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့စေတနာ့ဝန်ထမ်းအစီအစဉ်များလုပ်ကိုင်ရန်
ရေကူး, snorkel သို့မဟုတ်ပင်အတွက်ဂူရေငုပ်သွားပါ cenotes , ယူကာတန်ကျွန်းဆွယ်အောက်ကိုတွေ့မြေအောက်မြစ်စနစ်။ အဆိုပါလမ်းရက်နေ့တွင်, Gran Cenote သွားရောက်ကြည့်ရှု Coba အပျက်အယွင်း သငျသညျတွင်းထဲမှာ snorkel နိုင်သောနေရာ, သို့မဟုတ်အထဲကတစ်ဦးထက်ပိုအမှတ်ရစရာနေ့အဘို့ကဲ့သို့ဒေသခံတစ်ဦးမတ်မတ်နဲ့ခရီးစဉ်စီစဉ် AllTourNative , နည်းနည်း-သွားရောက်ခဲ့ပြီးအစက်အပြောက်ဖို့ဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပဲ့ထိန်းခရီးစဉ်စီစဉ်နိုင်သူ ။
တစ်ဦးအတွက်အထဲကချွေး temascal , ခရီးသွားများအတွက်အကြားတစ်ဦးပိုမိုလူကြိုက်များလိုက်စားဖြစ်လာရဲ့ရှေးဟောင်းမာယာချွေးအိပ်ရိုးရာဓလေ့။ Cabanas Copal မှာ spa တောတွင်းအတွက်တတ်နိုင်ဗားရှင်းကမ်းလှမ်း
အဘယ်မှာရှိ Tulum အတွက်စားသောက်ရန်:
ဒွန် Cafeto, ကြီးသောမုန်, ကော်ဖီနှင့် streetfront လူတွေကိုကြည့်ရှုခြင်း။ Avenida Tulum 64, Lote 12. ဖုန်းနံပါတ်: +52 984 871 2207
la Nave, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သစ်သားပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့ပီဇာနှင့်ဥရောပဝိုင်။ Avenida Tulum 570. ဖုန်းနံပါတ်: +52 984 871 2592
ana y ကဟိုဆေးဒီအလူကြိုက်များဟိုတယ်တွင်ရင်ခုန်စရာ oceanview စားသောက်ဆိုင်။ Carretera Tulum-Bocapaila, ကီလိုမီတာ 7, ဟိုတယ်ဇုန်။ ဖုန်းနံပါတ် +52 998 880 6022
CASA Banana , လှပသောဆန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့သောအာဂျင်တီးနား-မက္ကဆီကန်ပေါင်းစပ်။ Carretera Tulum-Boca Paila ကီလိုမီတာ 8.5, ဟိုတယ်ဇုန်။ ဖုန်းနံပါတ် +52 984 877 8512
la မြင်းကျား, Carretera Tulum တစ် Boca Paila ကီလိုမီတာ 8.2, ဟိုတယ်ဇုန်။ +52 984 115 4728
Zahra, Carretera Tulum-Ruinas ကီလိုမီတာ 5, ဟိုတယ်ဇုန်။ ဖုန်းနံပါတ် +52 984 115 4728
Tulum ၌အကြှနျုပျတို့၏အကွိုကျဆုံးစားသောက်ဆိုင်အကြောင်းပိုမို Read
အဘယ်မှာရှိ Tulum အတွက်နေပါမှ:
ana y ကဟိုဆေး။ ဖုန်းနံပါတ် +52 998 880 56 29 သို့မဟုတ် website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
Cabanas Copal ။ ဖုန်းကို +1 866 471-3472 သို့မဟုတ် website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
Azulik ။ ဖုန်းနံပါတ်: ခွန်ကောက်အခမဲ့အမေရိကန် / ကနေဒါ +1 866 471-3472 သို့မဟုတ် website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
Tulum သည်အိပ်မက်။ အားလုံးအားလုံးပါဝင်နိုင်ဇိမ်ခံကား။ ဖုန်းနံပါတ် +52 984 871 3333 ဒါမှမဟုတ် website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
la Nueva Vida က de Ramiro ။ ဖုန်းနံပါတ် +52 984 877 8512 ဒါမှမဟုတ် website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
la မြင်းကျား။ ဖုန်းနံပါတ် + 1-303-578-1301 သို့မဟုတ် website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု
Tulum အတွက်ရင်ခုန်စရာအပန်းဖြေစခန်းအကြောင်းကိုပိုမို Read
Cancun ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် (လေဆိပ်ကုဒ် CUN) ကို Riviera မာယာများအတွက် entry ကို၏အဓိကအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Cancun လေယာဉ်ခရီးစဉ်များရှာရန်။ Tulum တစ်နာရီနှင့်လေဆိပ်ကနေတစ်နှစ်ခွဲ drive ကိုလှည့်ပတ်သည်။
Tulum ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ် collectivo မှလွှဲပြောင်းထို့နောက် Playa del Carmen မှ ADO / Mayab ဘတ်စ်ကားကိုယူပါ။
ထို့နောက် Cancun စီးတီးဘတ်စ်ကား Terminal နှင့် Tulum တစ်ဦးဘတ်စ်ကားမှ ADO ဘတ်စ်ကားကိုယူပါ။
Tulum အတွက်ဟိုတယ်ကိုတိုက်ရိုက်လေဆိပ်ကနေတက္ကစီသို့မဟုတ်ငှားရမ်းကားတစ်စီးငှားရမ်း။ (ဒီကြောင့်အကွာအဝေးမှစျေးကိုအဆမတန်မြှနိုင်ပါတယ်နေစဉ်, အဖြစ်မကြာခဏတက္ကစီစားပွဲပေါ်မှာအနီးတဝိုက်ကိုမေးခရီးသွားများအတွက်အတူတကွ Band နှင့်တစ်ဦး collectivo တက္ကစီငှားရမ်းခြင်းနှင့်စျေးနှုန်းခွဲနိုင်ပါတယ်။ )
လွတ်လပ်စွာဒေသစူးစမ်းဖို့ (နှုန်းထားများနှိုင်းယှဉ်) ကားငှား။ မက္ကစီကိုအချို့ကတခြားဒေသများနှင့်မတူဘဲ, အ Riviera မာယာအတွက်လမ်းများကောင်းသောအခြေအနေဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကောင်းစွာမှတ်သား။
အဆိုပါ Riviera မာယာအပေါ်4ဂရိတ် All-Inclusive မိသားစု Resorts
Xpu Ha နန်းတော်
Cenote ဂူ: အဆိုပါ Riviera မာယာရဲ့ Deluxe Scuba & Snorkel စွန့်စားမှု
မက္ကစီကိုရဲ့ Riviera မာယာ
2018 ၏ 8 အကောင်းဆုံးမိသားစု-Friendly Riviera မာယာ Resorts
Los Angeles ကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါတစ်အိမ်နီးချင်းရွေးချယ်ခြင်း
ဘယ်လေကြောင်းလိုင်း 2017 အတွက်အလုံခြုံဆုံးဖြစ်ပါသလား
ဧဝရက်တောင်ထိပ်အခြေစိုက်စခန်း (တိဘက်ဘေးထွက်) ဧည့်သည်ရဲ့လမ်းညွှန်
တမ် Tams Montreal
သင်ကသွားရောက်ရမည်5တောင်ဒါကိုတာ RV ပန်းခြံ